Meksika: Ny Fifindra-monin’ny Lolo Mpanjakatokana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 03 Avrily 2018 18:06 GMT
Vakio amin'ny teny Français, македонски, বাংলা, Español, Italiano, English
(Marihina fa tamin'ny 11 Febroary 2010 no nanoratana ny lahatsoratra teny Anglisy)
Misy tranga tsy manampaharoa mampahatsiahy antsika fa maro ny maha-zava-mahagagan'ny natiora eo anelanelan'i Meksika, Etazonia Avaratra, ary Canada. Io zava-mahagaga io dia vitan'ny lolo mpanjakatokana, izay bibikely mahavita mandany ny fiainan'ny taranaka telo ka hatramin'ny efatra mba ahafahany mifindra monina avy amin'ny firenena iray mankany amin'ny iray hafa.
Mariposa Monarca sary avy amin'ny mpisera flickr Gustavo (lu7frb) lisansa Creative Commons.
Nofaritana toy izao ny lolo mpanjakatokana ao amin'ny bilaogy Destinos Inolvidables [es] ( Toerana tsy hay hadinoina) :
Miavaka noho ny tanjany sy ny halavan'ny andro iainany ny lolo mpanjaka, ankoatra ny hatsaran-tarehiny, afaka miaina mandritra ny 9 volana ny lolo mpanjaka, izany hoe avo 12 heny mihoatra amin'ny karazana lolo hafa izay tsy velona afatsy ao anatin'ny 24 andro monja.
Isan-taona rehefa faran'ny volana Oktobra, lolo mpanjakatokana an-tapitrisany no tonga any anaty ala any Michoacan sy any amin'ny fanjakana México ao Meksika rehefa avy nanidina 4000 kilaometatra teo ho eo avy any avaratr'i Etazonia sy Canada izy ireo. Tonga nijery ny habetsak'ireo lolo tao anaty ala ireo mponina tao amin'ny faritra sy ireo mpizahatany, tany amin'ny toerana fantatra ho toerana masina. Toy izao ny fanazavana ny fitsidihana ilay toerana masina tao amin'ny bilaogy Tips de Viajero [es] :
Fitsidihana mahafinaritra, tena nahareraka, kanefa rehefa tonga teny an-tampony ianao ary nanatri-maso ireo lolo an-tapitrisany manidina manodidina anao dia tsy hay ny milaza mamariparitra izany. Variana tokoa ny ankizy ary lasa mitolagaga ihany koa ny olon-dehibe : hendry ny natiora, tsy misy isalasalana izany.
Lahatsary avy amin'i DavidDJC84:
Tany amin'ny vanim-potoana fahiny tany no nisy toy ity zava-niseho ity, satria misy ny fijoroana vavolombelona ara-tantara tamin'izany zava-mahafinaritra izany. Na dia any amin'ny toerana arkeolojika Meksikana aza, dia ahitana sary sokitra sy sary hosodokon'ny lolo mpanjakatokana. Mampalahelo anefa fa lasa sarotra kokoa ho an'ireo lolo ny miaina noho ny fandripahana ny ala sy ny fiovan'ny toetrandro. Araka ny voalazan'ny gazety El Universal , tamin'ny fiandohan'ny volana febroary 2010 fa maty noho ny hatsiaka naharitra tao amin'ny faritry ny toerana masina ao Santuario Piedra Herrada izay sarobidy indrindra tao amin'ny firenena ny 30% n'ny lolo mpanjakatokana.
Na izany aza, mbola mitohy hatrany ity ny fifindra-monin'ny lolo ity amin'izao fotoana izao. Ny El día de los Muertos (Fetin'ny Maty) no iray amin'ireo fetibe malaza indrindra any Meksika natao hahatsiarovana ny olon-tian'ireo Meksikana efa maty. Mino ny kolontsaina tompotany, ny vahoaka Mazahua, fa maneho ny fanahin'ny maty ny fahatongavan'ny lolo mpanjakatokana isaky ny volana Oktobra, satria mino ihany koa izy ireo fa mitondra hafatra avy amin'ireo andriamanitra sy ny Tany (tonia: reny) ireo lolo ireo.
Voalaza ao amin'ny bilaogy Rojo Mariposa (Lolo Mena) ity tranga ity:
Ankoatra ny fiheverana azy ho zava-mahagaga eto amin'ny fireneko, satria tonga rehefa manakaiky ny datin'ny Fetin'ny Maty nentim-paharazana izany, dia tonga ihany koa ny fanahin'ireo olona efa nodimandry. Takatrao amin'izay ve ny antony mahatonga ahy ho gaga amin'ity zava-mahatalanjona ity?